ကုန်ကြမ်း L-carnitine အမှုန့် (541-15-1) HPLC≥98% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှု
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / L-carnitine အမှုန့်
SKU: 541-15-1. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ, L-carnitine အမှုန့် (541-15-1) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
ကုန်ကြမ်း L-carnitine အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 197-212 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကုန်ကြမ်း L-carnitine အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
ကုန်ကြမ်း L-carnitine အမှုန့်အမည်များ
L-carnitine ၏စံထိုး 500-2,000 တစ်နေ့လျှင် mg ဖြစ်ပါတယ်။
(1) Acetyl-L-Carnitine: ဒီပုံစံကိုဦးနှောက်ကျန်းမာရေးနှင့် function ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးများ 600-2,500 တစ်နေ့လျှင် MG ကနေခြားနားသည်။
(2) L-Carnitine L-Tartrate: ဒီပုံစံကိုလေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးများ 1,000-4,000 တစ်နေ့လျှင် MG ကနေခြားနားသည်။
(3) Propionyl-L-Carnitine: ဒီပုံစံကိုမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်အတူရှိသူများအတွက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးများ 400-1,000 တစ်နေ့လျှင် MG ကနေခြားနားသည်။
တစ်နေ့လျှင် 2,000 မှတက်သုတေသနတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်, မီလီဂရမ် (2 ဂရမ်) အပေါ်အခြေခံပြီးရေရှည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် L-carnitine အများစုပုံစံများများအတွက်ထိရောက်သောထိုးဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံပုံရသည်။
ကုန်ကြမ်း L-carnitine အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဆေးညွှန်းများနှင့် over-the-counter ဆေးဝါးများ, ဗီတာမင်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်အပါအဝင် levocarnitine နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်အားလုံးဆေးဝါးနှင့်သင်စတင်ရန်သို့မဟုတ်သုံးပြီးရပ်တန့်မဆိုဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးချင်းစီပြောပြပါ။
ကုန်ကြမ်း L-carnitine အမှုန့်နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်
အများဆုံးကသဘာဝဖြည့်စွက်လိုပဲ, L-carnitine ပွီးပညာရှိရှိနှင့်ညွှန်ကြားအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခါမျှမျှတတလုံခြုံနှင့်လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အခမဲ့ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအ3နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့တိုင်းသင်တန်းသားများကို 21 ဂရမ်ပေးခြင်းအားဖြင့် L-carnitine ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကပြည့်စုံ, အသွေး panel ကိုလေ့လာမှု၏အစနှင့်အဆုံးတွင်အသီးအသီးပါဝင်သူဘို့ကောက်ယူခဲ့နှင့်မျှမတို့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။
L-carnitine ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း L-carnitine အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ L-carnitine အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
L-carnitine ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
L-carnitine နဲ့ L-carnitine အမှုန့်၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ?